Intsapho - ngaba ngabantu abemi bomthonyama abakulungele ukukuxhasa nganoma yimuphi umzuzu, kwaye kwimizuzu enzima. Kodwa ngamanye amaxesha ngisho naphakathi kwabantu abasondeleyo kukho kukho ukungquzulana okanye ukungaqondi.
Indlela yokuziphatha kwiimeko ezifanayo? Mhlawumbi enye yezindlela ezibalulekileyo zokuphepha ukungaqondani kwintsapho kukukwazi ukufumana ulwimi olufanayo kunye nolwabo. Ngoko, ngenxa yokuba unobumbano onokukwazi ukuziphatha ngayo kule nto okanye loo meko, intsapho yakho iya kuba nemihlali kakhulu.
Kwinkqubo yophuhliso lwentsapho nganye, ngaphakathi kwalo lwakhula umoya walo. Namhlanje, unako ukudibana nenani leentsapho, apho phakathi kwentsapho kulawula umoya wokuhlukanisa nokungaqondi. Imiphumo yobudlelwane obunjalo phakathi kwentsapho iyahlukahluka: ukususela kumtshato woqhawulo lwabazali, kwiingxaki ezibalulekileyo ezingqondweni zengqondo zabantwana.
Uza kuthetha ukuba intsapho ayikwazi ukuba khona ngaphandle kokungqubana. Ewe, kunjalo, kubaluleke kakhulu ukuba ukhumbule ukuba wonke umntu unama-pluses kunye ne-minuses yakhe, ngoko kufuneka ufunde ukuxolela nokunikela. Ukuba ngumanyanisi kuthetha ukukwazi ukuthetha nabantu. Idiplomat kufuneka kungekhona emsebenzini kuphela, kodwa ekhaya.
Ulwalamano oluhle kwintsapho elutsha lunokukunceda ukukhusela intsapho. Unganqikazi ukuxoxa ngazo zonke iingxaki ezivela - kuphela kunye unokufumana isisombululo esifanelekileyo. Musa ukuthukuthela xa ubuya ekhaya emva komsebenzi wosuku olukhuni, awufumani isidlo esilungele ukulungela ekhishini, mhlawumbi unyoko wayengazange abe nexesha lokuyipheka, kuba umntwana wayefuna ingqwalasela engaphezulu kunoko. Musa ukwenza i-scandals, ukuba namhlanje umyeni akazange ahlambe iipakethe, mhlawumbi ukhathele emsebenzini, ukuba akanalo amandla okwenza oku kwaye ufuna ukuphumla. Zama ukuzola, ukubuza ngokuzenzekelayo umntu wakho, ngesizathu sokuba isidlo asilungele, kwaye uyaziqonda. Oku kuya kusindisa iimbilini zakho kwaye kulondoloze ubudlelwane obuhle kwintsapho. Ekugqibeleni, ikhaphethi iya kuhlamba ngeveki, kwaye ukuze udle ungapheka i-sausages. Ubudlelwane obuhle kwintsapho eselula yindlela yokuphila kakuhle kwiseli enye yoluntu, kwaye yindlela efanelekileyo yokudala indlela ehambelana ngayo kunye nenkcubeko yobudlelwane beentsapho eziphilileyo.
Kuyaziwa ukuba iingxabano zentsapho ziyingozi kumntwana okhulayo. Ukunxibelelana kakubi phakathi kwabazali kunokuhlakulela kumntwana ukungabi nalukholo ekukholeni ubuhlobo bokwenene nobubele. Ukuxabana phakathi kwabatshatileyo kubonakala ekuphuculeni ngokomzwelo kwengane. Ukuba ngaba abazali abakwazi ukuziphatha ngokuzibandakanya kunye nokuzinqanda, kukho ithuba eliphezulu lokuba xa lo mntwana ekhula, uya kwakha ubudlelwane kwintsapho yakhe njengokuba ebone phakathi kwabazali bakhe. Ukongezelela, izenzo ezingabonakaliyo kunye namaxesha angenangqiqo zabazali zikhokelela ekubunjweni kwemvelo engabonakaliyo kubantwana.
Ngentlalo, umntwana uhlala efuna ukuxelisa umntu ocinga ukuba unamandla, unamandla, onothando nothando. Ngoko ke kubaluleke kakhulu ukudala ubudlelwane obulumko, obufudumele kunye obuqhawulekileyo kwintsapho. Makhe umntwana azi ukuba uyamthanda kwaye uyayixabisa ngaphezu kwanoma yini enye. Izindlela eziqapheleyo kunye nezobupolisi zokubonisa ukungamkelwa kwazo ziya kunceda ukuphazamisa umntwana ngempumelelo. Abazali kuphela abanandipha ngokuzithandela igunya lokuzimela kubantwana babo banokuthembela ekuthobeleni kwabo.
Ubudlelwane obuhle kwiintsapho ezincinci zikhula ngokuhlonipha umntu, ukuqonda, ukunyamezela kunye nothando. Injalo intsapho inika abantwana ubuninzi obuncedo ekuphuculeni ukuziphatha kwabantu, ngokwengqondo nangokomoya.
Thandanani, niyayixabisa kwaye niyihlonele.
Indlela yokufumana indlela kumntu?
Ukudakumba kwengqondo emva kokubeletha
Yintoni intombazana kufuneka ivakalelwe kukuba isetyhini?
Indlela yokuphuhlisa isithethi kwaye uyeke ukwesaba uluntu
Zininzi iindlela zokwenza ubomi bakho bube bhetele
U-Stas Kostyushkin unikezelwa ukutshintshela kubafana abancinci
Ziziphi iintlobo esityayo?
Cocktail "I-Russian Russian"
Unokwenza njani i-albhamu yesithombe somntwana?